June 2017 - ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ)
မိုဘိုင်းဖုန်းနဲ့ ဓာတ်ပုံရိုက်ထားပြီးရင် အသင့်ပေါ်လာတဲ့ ပုံကိုပဲသုံးတာထက် နည်းနည်းလေးတော့ Edit လုပ်တတ်ကြပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကိုယ်...
ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ) at 4:49 PM No comments:
Siri ရဲ့ ဘာသာပြန် feature အသစ်က ဒီလိုအလုပ်လုပ်တယ် (Video)
Apple အနေနဲ့ iOS 11 beta နဲ့အတူ iOS 11 မှာပါဝင်လာမယ့် feature အသစ်တွေကို မိတ်ဆက်ပြီးတဲ့ နောက်မှာ ဒီ feature အသစ်တွေနဲ့ ပတ်သတ်လို့ video ...
Siri ရဲ့ ဘာသာပြန် feature အသစ်က ဒီလိုအလုပ်လုပ်တယ် (Video) Reviewed by ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ) on 4:42 PM Rating:5Apple အနေနဲ့ iOS 11 beta နဲ့အတူ iOS 11 မှာပါဝင်လာမယ့် feature အသစ်တွေကို မိတ်ဆက်ပြီးတဲ့ နောက်မှာ ဒီ feature အသစ်တွေနဲ့ ပတ်သတ်လို့ video ...
ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ) at 4:42 PM No comments:
USB OTG ကို USB One-The-Go လို့လည်း ခေါ်ကြပြီး အလွန် အရေးပါတဲ့ တီထွင်မှု တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ သူဟာ ကိရိယာနှစ်ခုကို ဆက်သွယ်ပေးတဲ့အတွက် အသုံးဝင်...
ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ) at 4:35 PM No comments:
စမတ်ဖုန်းများကို လူတိုင်း အသုံးပြုနေကြပြီ ဖြစ်ပေမယ့် သူတို့ရဲ့ စွမ်းရည် အားလုံးကို မသိကြသေးပါဘူး။ စမတ်ဖုန်းများရဲ့ စွမ်းရည်များဟာလည်း တ...
ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ) at 4:30 PM No comments:
Internet Download Manager (IDM) 6.28 Build 15 CrackFull|8.11Mb [နောက်ဆုံးဗားရှင်း]
Jun 28, 2017 နေ့မှာထွက်ရှိလာ (IDM) 6.28 Build 15 နောက်ဆုံး Update အသုံးပြုတဲ့ မိတ်ဆွေများအ တွက်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။ဖိုင်ဆိုဒ်-8.11Mb ခန...
Internet Download Manager (IDM) 6.28 Build 15 CrackFull|8.11Mb [နောက်ဆုံးဗားရှင်း] Reviewed by ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ) on 1:41 AM Rating:5Jun 28, 2017 နေ့မှာထွက်ရှိလာ (IDM) 6.28 Build 15 နောက်ဆုံး Update အသုံးပြုတဲ့ မိတ်ဆွေများအ တွက်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။ဖိုင်ဆိုဒ်-8.11Mb ခန...
ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ) at 1:41 AM No comments:
နောက်ဆုံးဗားရှင်းအသစ်ထွက်ရှိလာတဲ့ Messenger Official Update v124.0.0.43.69 App [50.2Mb]
မင်္ဂလာပါ... Messenger Official Update v124.0.0.43.69 App နောက်ဆုံးဗားရှင်း အသုံးပြုတဲ့ချစ်မိတ် ဆွေများအတွက် No Ads လင့်ခ် ကောင်းကောင်...
နောက်ဆုံးဗားရှင်းအသစ်ထွက်ရှိလာတဲ့ Messenger Official Update v124.0.0.43.69 App [50.2Mb] Reviewed by ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ) on 10:35 PM Rating:5မင်္ဂလာပါ... Messenger Official Update v124.0.0.43.69 App နောက်ဆုံးဗားရှင်း အသုံးပြုတဲ့ချစ်မိတ် ဆွေများအတွက် No Ads လင့်ခ် ကောင်းကောင်...
နောက်ဆုံးဗားရှင်းအသစ်ထွက်ရှိလာတဲ့ Facebook Official Update v130.0.0.45.70 App [68.4Mb]
မင်္ဂလာပါ... မိမိတို့ဖုန်းမှာ လက်ရှိအသုံးပြုနေတဲ့ Facebook ဗားရှင်းကို ထပ်မံ၍ Upgrade လုပ်ဖို့ နောက် ဆုံးဗားရှင်းအသစ်ထွက်ရှိလာတဲ့ Facebo...
နောက်ဆုံးဗားရှင်းအသစ်ထွက်ရှိလာတဲ့ Facebook Official Update v130.0.0.45.70 App [68.4Mb] Reviewed by ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ) on 10:03 PM Rating:5မင်္ဂလာပါ... မိမိတို့ဖုန်းမှာ လက်ရှိအသုံးပြုနေတဲ့ Facebook ဗားရှင်းကို ထပ်မံ၍ Upgrade လုပ်ဖို့ နောက် ဆုံးဗားရှင်းအသစ်ထွက်ရှိလာတဲ့ Facebo...
ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ) at 10:03 PM No comments:
ဖုန်းတစ်ခုလုံးနှေကွေးနေတာကို မြန်ဆန်သွားအောင် One-Click Clean လုပ်ပေးမယ့်- CCleaner Professional v1.20.80 Cracked App
Android နှင့် Tablet ဖုန်းကိုင်ဆောင်ကာ CCleaner Pro v1.19.76 Cracked Apk နောက်ဆုံးဗားရှင်းအ သုံးပြုလိုတဲ့ ချစ်မိတ်ဆွေများအတွက် အသစ်ရလာလိ...
ဖုန်းတစ်ခုလုံးနှေကွေးနေတာကို မြန်ဆန်သွားအောင် One-Click Clean လုပ်ပေးမယ့်- CCleaner Professional v1.20.80 Cracked App Reviewed by ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ) on 9:34 PM Rating:5Android နှင့် Tablet ဖုန်းကိုင်ဆောင်ကာ CCleaner Pro v1.19.76 Cracked Apk နောက်ဆုံးဗားရှင်းအ သုံးပြုလိုတဲ့ ချစ်မိတ်ဆွေများအတွက် အသစ်ရလာလိ...
ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ) at 9:34 PM No comments:
ဖုန်းမှာ ဗီဒီအိုတွေကို Effects အလန်းတွေနဲ့စာတန်းထိုးစိတ်ကြိုက်တည်းဖြတ်နိုင်တဲ့-PowerDirector v4.5.1 Full App [နောက်ဆုံးဗားရှင်း]
Android/Tablet ဖုန်းတွေမှာPowerDirector Video Editor App v4.5.1 အသုံးပြုလိုသူများအတွက်(၆) လပိုင်း နောက်ဆုံးထွက် Update အသစ်လေးရလာလို့တင...
ဖုန်းမှာ ဗီဒီအိုတွေကို Effects အလန်းတွေနဲ့စာတန်းထိုးစိတ်ကြိုက်တည်းဖြတ်နိုင်တဲ့-PowerDirector v4.5.1 Full App [နောက်ဆုံးဗားရှင်း] Reviewed by ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ) on 8:19 PM Rating:5Android/Tablet ဖုန်းတွေမှာPowerDirector Video Editor App v4.5.1 အသုံးပြုလိုသူများအတွက်(၆) လပိုင်း နောက်ဆုံးထွက် Update အသစ်လေးရလာလို့တင...
ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ) at 8:19 PM No comments:
မန္တလေးတိုင်းအတွင်းရှိ အစိုးရဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းတွေ ဆောင်ရွက်ရာမှာ မြန်ဆန်စေဖို့အတွက် အစိုးရရုံးဌာနတွေနဲ့ ပြည်သူလူထုကို ဆက်သွယ်ပေးမယ့် eMandalay App
eMandalay ( www.emandalay.gov.mm ) သည် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ အစိုးရ ရုံးဌာနများအားလုံးနှင့် ပတ်သတ်သော အဓိက အချက်များ၊ ပြည်သူကို ...
မန္တလေးတိုင်းအတွင်းရှိ အစိုးရဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းတွေ ဆောင်ရွက်ရာမှာ မြန်ဆန်စေဖို့အတွက် အစိုးရရုံးဌာနတွေနဲ့ ပြည်သူလူထုကို ဆက်သွယ်ပေးမယ့် eMandalay App Reviewed by ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ) on 6:38 PM Rating:5eMandalay ( www.emandalay.gov.mm ) သည် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ အစိုးရ ရုံးဌာနများအားလုံးနှင့် ပတ်သတ်သော အဓိက အချက်များ၊ ပြည်သူကို ...
Realtek High Definition Audio Drivers 6.0.1.8184 [နောက်ဆုံးဗားရှင်း]
Realtek High Definition Audio Drivers 6.0.1.8184 Full နောက်ဆုံးထွက် Update ဗားရှင်းအသစ်ကိုမျှ ဝေပေးလိုက်ပါတယ်။ မိမိတိုရဲ့ ကွန်ပျူတာမှာ...
Realtek High Definition Audio Drivers 6.0.1.8184 [နောက်ဆုံးဗားရှင်း] Reviewed by ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ) on 10:29 PM Rating:5Realtek High Definition Audio Drivers 6.0.1.8184 Full နောက်ဆုံးထွက် Update ဗားရှင်းအသစ်ကိုမျှ ဝေပေးလိုက်ပါတယ်။ မိမိတိုရဲ့ ကွန်ပျူတာမှာ...
ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ) at 10:29 PM No comments:
Root လုပ်ချင်သူများအတွက်ဆောင်ထားသင့်တဲ့ Root Installer APK
Root Installer APK လေးကတော့ဖုန်းတော်တော်များများကို ကွန်ပျူတာမလိုပဲ Root ဖောက်ပေးနိုင်တဲ့ KingRoot, iRoot, 360Root, BaiduRoot တို့ပါဝင်တ...
Root လုပ်ချင်သူများအတွက်ဆောင်ထားသင့်တဲ့ Root Installer APK Reviewed by ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ) on 8:54 PM Rating:5Root Installer APK လေးကတော့ဖုန်းတော်တော်များများကို ကွန်ပျူတာမလိုပဲ Root ဖောက်ပေးနိုင်တဲ့ KingRoot, iRoot, 360Root, BaiduRoot တို့ပါဝင်တ...
ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ) at 8:54 PM No comments:
Artificial Intelligence (AI) နည်းပညာဟာ အဆင့်မြင့်လာပါပြီ။ သူဟာ လူသားတွေရဲ့ လူနေမှုဘ၀များကို များစွာ အထောက်အကူပြုနေပါတယ်။ ဒီနေ့ခေတ်မှာ စမ...
ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ) at 6:31 PM No comments:
INTERNET 1000% FREE! ဆိုတာကတော့ Malaysia ရောက် မြန်မာများအတွက် သီးသန့်ဖြစ်ပါတယ်။ အားလုံးအသုံးဝင်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်... :) ...
FREE INTERNET (1000% FREE Only For Malaysia) Reviewed by ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ) on 11:26 PM Rating:5INTERNET 1000% FREE! ဆိုတာကတော့ Malaysia ရောက် မြန်မာများအတွက် သီးသန့်ဖြစ်ပါတယ်။ အားလုံးအသုံးဝင်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်... :) ...
နောက်ဆုံးဗားရှင်းအသစ်ထပ်မံထွက်ရှိလာတဲ့ Facebook v129 နှင့် Messenger v123 Apk
မင်္ဂလာပါ...နောက်ဆုံးဗားရှင်းအသစ်ထပ်မံထွက်ရှိလာတဲ့ Facebook v129 and Messenger v123 Apk Official Version Update လေးကိုအသုံးပြုလိုတဲ့မိတ်ဆေ...
နောက်ဆုံးဗားရှင်းအသစ်ထပ်မံထွက်ရှိလာတဲ့ Facebook v129 နှင့် Messenger v123 Apk Reviewed by ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ) on 10:35 PM Rating:5မင်္ဂလာပါ...နောက်ဆုံးဗားရှင်းအသစ်ထပ်မံထွက်ရှိလာတဲ့ Facebook v129 and Messenger v123 Apk Official Version Update လေးကိုအသုံးပြုလိုတဲ့မိတ်ဆေ...
Root ဖောက်ထားတဲ့ ဖုန်းလေးလံမသွားအောင် သန့်ရှင်းရေးလုပ်ပေးမယ့် - Root Cleaner v7.1.3 Full App [နောက်ဆုံးဗားရှင်း]
Android Phone/Tablet ကိုင်ကောင်ကာ Root Cleaner 7.1.3 အသုံးပြုသူများအတွက် ၆ လပိုင်း ၁၂ရက် နေ့နောက်ဆုံးထွက် Update ကိုမျှဝေပေးလိုက်ပါတ...
Root ဖောက်ထားတဲ့ ဖုန်းလေးလံမသွားအောင် သန့်ရှင်းရေးလုပ်ပေးမယ့် - Root Cleaner v7.1.3 Full App [နောက်ဆုံးဗားရှင်း] Reviewed by ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ) on 12:10 AM Rating:5Android Phone/Tablet ကိုင်ကောင်ကာ Root Cleaner 7.1.3 အသုံးပြုသူများအတွက် ၆ လပိုင်း ၁၂ရက် နေ့နောက်ဆုံးထွက် Update ကိုမျှဝေပေးလိုက်ပါတ...
ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ) at 12:10 AM No comments: